I-China CE Approval 32A 7kw EV Ishaja esheshayo Isiteshi Sokushaja Imoto Yomphakathi esine-Ocpp1.6j Ukukhiqizwa nefektri | I-Joint Tech
Ukuvunyelwa kwe-CE 32A 7kw EV Ishaja esheshayo Isiteshi Sokushaja Imoto Yomphakathi Esine-Ocpp1.6j
I-OEM eyenziwe ngokwezifiso i-China EV Ukushaja Inqwaba, isebenzisa uhlelo oluhamba phambili emhlabeni lokusebenza okuthembekile, isilinganiso sokuhluleka okuphansi, ilungele ukukhetha kwamakhasimende emhlabeni. Inkampani yethu itholakala ngaphakathi kwamadolobha aphucukile kazwelonke, ithrafikhi ilula kakhulu, izimo zomhlaba nezomnotho ezihlukile. Siphishekela ukukhiqiza okugxile kubantu, ukucubungula, ukwakha izingqondo, ukwakha ifilosofi yebhizinisi ekhazimulayo. Ukuphathwa kwekhwalithi eqinile, insizakalo ephelele, intengo efanelekile emhlabeni ukuma kwethu embonweni wokuncintisana. Uma kunesidingo, wamukelekile ukuxhumana nathi ngewebhusayithi yethu noma ngocingo ukubonisana, sizojabula ukukusiza.
Lokukhipha Amandla: 7kW, 11kW, 22kW
Okokufaka Kwamanje: 16A, 32A
I-Voltage yokufaka: 230 ± 10% (1 isigaba), 400 ± 10% (isigaba 3),
I-RCD: Thayipha A + DC6mA
Isokhethi Ubukhulu: 350x250x130mm
Sikholelwe ukuthi ngemizamo ehlangene, ibhizinisi phakathi kwethu lizosilethela izinzuzo ezifanayo. Singakuqinisekisa ngento entengo enhle futhi enobudlova ye-OEM eyenziwe ngokwezifiso i-China CE Approval 32A 7kw EV Ishaja esheshayo Isiteshi Sokushaja Imoto Yomphakathi nge-Ocpp1.6j. siheha abathengi ngezindleko ezinolaka nangesevisi ehlukile. Ngaphezu kwalokho, impela ngobuqotho nobuqotho bethu, okusisiza ngaso sonke isikhathi ukukhetha kuqala kwamakhasimende.
Igama Lesibonelo EVC10-07C1S EVC10-07C1C EVC10-22C1S EVC10-22C1C
Isigaba se-230 ± 10% （1
Isigaba sama-400 ± 10% （3)
Okokufaka Kwamanje 32A
Lokukhipha yamanje 32A
Isokhethi eyodwa yokushaja
Intambo yokushaja engu-5m Isokhethi eyodwa yokushaja Intambo yokushaja engu-5m
Thayipha A + DC6mA
Idizayini edidiyelwe kakhulu emakethe ngokusebenza okuphezulu kakhulu, uhlelo lokushaja oluhlakaniphile lwezimoto zokuxhuma, ezenzelwe izindawo zomphakathi nezamabhizinisi amasha. Kulula ukuyifaka, kulula ukuyisebenzisa futhi kulula ukuyithokozela.
Kungumklamo omusha nowenziwe ngcono wesizukulwane sesibili, ofaka ukuvikelwa kokuvuza kwangaphakathi. Okwenza ukufakwa kube lula futhi kube nokonga ngaphezulu. Ishaja ixhuma nepulatifomu yokuphatha, eyenza kube smart futhi inikeze ukufinyelela komsebenzisi okuningi ngekhadi le-RFID elilula noma uhlelo lokusebenza lweselula lweWallbox.
Insizakalo yokwesekwa okwenzelwe wena: Ubukhulu be-350x250x175mm. I-4.3, i-untouchscreen ene-interface yangokwezifiso namandla wokushaja aguquguqukayo avela kusibonisi. Ingasetha amashejuli amane ahlukene kabusha amasha ukuze aqondane nezindleko zamandla aphansi.
Langaphambilini Ikhwalithi ephezulu yeModi 3 32A Isigaba Esisodwa Isigaba 3phase Isiteshi Sokushaja se-EV
Olandelayo: Uhlobo lweSocket 2 32A 22kw Isigaba Esithathu EV Ukushaja Ingqalasizinda EV Ishaja Yokushaja Izimoto Zikagesi
uhlelo lokushaja imoto kagesi
ev car charger ekhaya
Intengo yeshaja ye-Ev
izinhlobo zeziteshi zokushaja ze-ev
Ishaja Yemoto Kagesi Yomhlaba Wonke
Ikhwalithi ephezulu Yemodi 3 32A Isigaba Esinye 3phase ...
Thayipha 2 16A 11kw EV Ishaja yeMoto kagesi ...